May Nyane: ပြောမဆုံးပေါင်...
ဟုတ်တယ်ဗျာ.. မြန်မာစာလုံးပေါင်းတွေက တခါတလေ မှန်တယ်ထင်တာတွေ မှားနေတတ်တယ်... တချို့တွေကျတော့လည်း အဘိဓါန်တွေမှာကို မတူတာ.... တခါက ဖြစ်ဖူးတယ်... `ဗူး` နဲ့ `ဘူး` ဘူးသီးလား.. ဗူးသီးလား... ဘီယာဗူးလား.. ဘီယာဘူးလား.... :D.. နောက် ဘိနပ်လား.. ဖိနပ်လား... တချို့တွေကျ ခေတ်ပြောင်းတာနဲ့ အရေးအသားတွေ ပြောင်းသွားသလား.... အရင်က စာအုပ်တွေမှာ ဘိနပ်ပဲ ရေးပေမယ့် ခုကျတော့ ဖိနပ်ပဲ တွေရတော့တာမျိုး... ပြောရရင် မြန်မာစာကတော့ မြင့်တယ်ဗျာ.. ဥာဏ်မမီဘူး... :D
ကိုယ်ကအမှန်လို့ထင်ထားတာတွေ မှားနေတာတွေ များတယ်။ အခုလို ရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးမမ..
ကျွန်မလဲ စာလုံးပေါင်းတစ်ချို့ကို ဘယ်ဟာအမှန်အမှားဆိုတာ မခွဲနိုင်ဘဲ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်တာမို့ မှားရေးမိတာတွေ ရှိပါတယ်..
အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းမှာ စစ်ပေမဲ့ အလျင်စလို ရေးမိပြီး ပြန်မစစ်တာတွေကျတော့ မှားမိပါတယ်..
ဆရာမရေးပြထားတဲ့ စာလုံးတွေကိုကြည့်မှ တစ်ချို့ဟာတွေ ငါမှားနေပါလားလို့ သတိထားမိတယ်.. ခုလို ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..
ညလေးမရှိလို့ ညာဏ်လို့ ရေးမိတာ ၊ ခဏကို ခန လို့ ရေးမိတာများကိုတော့ ခွင့်ပြုလို့ရမယ် ထင်ပါတယ် ။ ဠ ၊ ဍ ၊ ဋ ၊ စသည့်အသုံးများကို တ ၊ ထ၊ ဒ ၊ ဓ ၊ န ဟူသော စာလုံးများနှင့် ( ပါဠိ မူ မဟုတ်ပါက ) သုံးနိုင်မည် ထင်ပါသည် ။ ( ကျွန်တော် ယူဆခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။ )
အရသာဆိမ့်တာကို စိမ့်တယ်ဆိုပြီး ရေးနေကြတာ။
စားလိုက်ရင် စိမ့်စိမ့်လေးဆိုတော့ ဖတ်ရင်းစားလိုက်ရတာ သွားတောင်စိမ့်သွားတယ်။ :D
အဲဒါက ဘယ်ဟာမှန်တာလဲ အစ်မ ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လို့ရေးတာရော မှန်ပါသလား... ?
ဝါသနာကို “ဝါတနာ” နဲ့ သက်သေကို “သတ်သေ” လို့ ရေးတာကတော့ အတော်လေးကို ဆိုးပါတယ်၊း)
“ရပ်ဆဲ” ကလည်း မရပ်စဲဘူး ဆိုရင် ရပ်ပြီးဆဲမယ်လို့ ဆိုချင်တာလား မသိ၊း) ၂၀၀၃ မှာ ဒုတိယအကြိမ် ပုံနှိပ်ခြင်းအနေနဲ့ ထွက်လာတဲ့ သတ်ပုံကျမ်းမှာတော့ “အနှောင့်အယှက်” လို့ ရေးထားတာ တွေ့တယ် အမရေ..၊ ၂၀၀၃ နောက်ပိုင်းမှာ သတ်ပုံကျမ်း ထပ်ထွက်ပြီး “အနှောက်အယှက်” လို့ ပြင်လိုက်တာ များလား? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို ယှဉ်မရေးထားရင် အမှားကို တွေ့လည်း အမှန်လို့ အောက်မေ့နေမိတတ်လို့ ကျေးဇူးပါပဲ အမရေ...။
ဟုတ်ပါတယ်.. မြန်မာစာမှာလည်း ၀ိဝါဒကွဲတွေ အများကြီးပါ။ ဒါကြောင့် ကျမပြောခဲ့တာပါ..။ တော်ရုံ အဓိပ္ပါယ်လွဲမသွားစေတဲ့ အမှားဆို အရေးမကြီးဘူးလို့...ခု ကိုနေ၀သန်ပြောတဲ့ ဘူးသီးဆို တကယ်က ဗူးသီးလို့ တသက်လုံးပေါင်းလာတာ.. ခုကျတော့ ဘူးသီး..တဲ့။ ဘာလို့အဲလိုပေါင်းသလဲဆိုတော့ ပစ္စည်းထည့်တဲ့ ဘူးနဲ့ တူလို့လို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ ဒါဖြင့် အဲဒီဘူးကိုရော ငြင်းဆိုတဲ့ ဘူးနဲ့ မရောရအောင် ဗူးလို့ မပေါင်းသင့်ဘူးလား။ ကျမ အမြဲ စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ဗူ;ဘုရား လား.. ဘူးဘုရားလား :)
အစ်မလည်း ခုထိ မှားတုန်း.. မသေချာတဲ့ စာလုံးတွေ ခုထိ သတ်ပုံကျမ်း ကြည့်ရတုန်း..
အဓ်ိကက အဓိပ္ပါယ်မလွဲဖို့ပါပဲလေ..။ အမှန်အတိုင်း ရေးနိုင်တာကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
စူးရေ.. သိတယ်မဟုတ်လားကတော့ စကားပြောနဲပဆို သိတယ်မို့လား ဖြစ်တာပါပဲ။ :)
အဲဒီအနှောက်အယှက်ကလည်း ပြဿနာပဲဗျ.. တသက်လုံးမှတ်လာတာ အနှောက်..ဆိုတော့ သတ်ပုံကျမ်းတောင် မလှန်ခဲ့တာ ခု ညီလင်းပြောမှ ကြည့်တော့ ဟုတ်ပါ့.. အနှောင့်..တဲ့။ အစ်မသိတဲ့ အနှောင့်ကတော့ အနှောင့်အသွားပါ..။ ဆိုတော့ အနှောင့်အယှက်ကို အဲလိုများ ဆက်စပ်ယူလေသလားပဲ..။ တခုခုက ခုခံ တားဆီးနေတဲ့ အဓိပ္ပါယ်..။ ခုမှ ပြန်သတိထားမိရပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း.. ရှဲရှဲ...။
ကျေးဇူးအမရေ... အဲလိုအသေအချာ ပြောပြမဲ့သူတွေ အနားမှာမရှိဘူး... အဲလိုလေးတွေများများပြောပြပေးပါ... စာရေးခါနီး spelling check လုပ်သလိုမျိုး အမဆီလာလာရှာကြည့်မယ်နော်...
အစ်မရေ...ညီမ စာရေးရင် မမှားအောင် ကြိုးစားရေးလေ့ရှိပါတယ် အစ်မ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ ဇဝေဇ၀ါတွေကို စာရေးပြီးချင်စိတ်နဲ့ မသေမချာ လွှတ်လိုက်ရတာတွေ ရှိတယ် အစ်မရ။ အဓိပ္ပါယ်ကြီး သိပ်လွဲသွားတာတွေ ဖတ်မိရင် ကိုယ်တိုင်လည်း မကြိုက်နိူင်ဘူးကိုး အစ်မရဲ့.....။ ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ။ အစ်မဆီက ဘလော့ဂ်ဂါ လက်စွဲစာအုပ် လာယူပါဦးမယ်......
ကျေးဇူးပါ ဆရာမရေ... စာလုံးပေါင်းကို အရင်တုန်းက အရမ်းသတိထားပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို စာလုံးပေါင်းမှားတဲ့ စာရေးသူတွေဆို အထင်လေးသေးတတ်သေးတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်ကျမှ စာလုံးပေါင်းမှားနေတာတောင် မသိ။ သူများလာပြောမှ သိတဲ့အဖြစ်ကို ရောက်ပါတော့တယ် :P ...ရေးချင်ဇောကြီးနေတော့ သတိလွတ်သွားတာပါ။ အခု စာလုံးပေါင်းကို သိပ်ဂရုမမူချင်တော့ပေမယ့် ဆရာမစာလေးကြောင့် ပြန်သတိထားပြီး သေချာဂရုစိုက်ပြန်ပြန်စစ်ပါ့မယ်း)။
ဆရာမကြီးလို့ မထင်ရဲပါဘူးအစ်မ.. အယ်.. မပြောရက်ပါဘူး အစ်မ..း)
ကျွန်မဆို အမြဲမှားတယ်.. ခဏခဏ မှားတယ်။ ဘလော့ရေးစက တော်တော်လေးမှားပေမယ့် ခုတော့ပြင်ရင်းပြင်ရင်း နည်းနည်းတော့ မှန်လာခဲ့ပါပြီ။း)
အစ်မကိုတစ်ခုမေးချင်လို့ပါ။ "လွဲ" နဲ့ "လွှဲ" ကို ကျွန်မခွဲမတတ်လို့ပါ။ အွန်လိုင်းက မြန်မာစာလုံးပေါင်း ဝက်ဆိုက်ကိုလိုက်ကြည့်တော့ လိုချင်တဲ့အဖြေတွေ သိပ်မရှိဘူး။ အစ်မ အားရင် နည်းနည်းပြောပြပေးပါနော်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..း)
လွဲ က Active ပါ.. လွှဲက Passive ။ ဆိုတော့ ကျ နဲ့ ချ လိုပေါ့.. သူ့အလိုလို ကျတယ်..။ တယောက်ယောက်က ချတယ်။ လွဲသွားတယ်.. လွှဲပေးတယ်...။ လွှဲလိုက်တာ လွဲသွားတယ်။ အဲလို..။ ရပြီထင်တယ်နော်...။
ပိုစ့်ရော... ကော်မန့်တွေရော ဖတ်လိုက်တယ်... စာတပုဒ်ရေးတိုင်း စာလုံးပေါင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး (အတတ်နိုင်ဆုံး) မမှားရလေအောင် သတိထားပါတယ် အမ... တကယ်လို့ အမြင်မတော်တဲ့ အမှားတွေ တွေ့ရင်လည်း ပြင်ပေးပါနော် အမ...း))
မလေး ဒီငါးနှစ်တွင်းမှာတော့ စာလုံးပေါင်း တော်တော် တိုးတက်လာတယ်..
စာလုံးပေါင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုလို အမကိုယ်တိုင်က ရေးလာတာတွေ့ရလို့ အရမ်း ၀မ်းသာပါတယ်။
အများကောင်းဖို့အတွက်ပဲ သတ္တိတွေ ရှိလိုက်ပါ။ အမ တစ်ယောက်တည်း အားမရှိရင် အနောက်ကနေ တွန်းကူဖို့ အမြဲ အသင့်ပါပဲ။
ကျွန်တော်လည်း စာရေးတဲ့သူတွေ မမှားသင့်တဲ့ အမှားတွေကို မြင်တိုင်း မြန်မာစာကို အလေးမထားတာကို သိရလို့ စိတ်မကောင်း အမြဲ ဖြစ်ရတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာရေးလို့ စာလုံးပေါင်း မှားရင် ရှက်ရမှန်း သိကြပြီး E Dictionary ကို အမြဲ အားကိုးကြသလို မြန်မာ သတ်ပုံကျမ်းကိုလည်း အဲ့ဒီလို သဘောထားပြီး ကြည့်စေချင်မိတယ်။ အားကိုးစေချင်တယ်။
အများအားဖြင့် မသေချာတဲ့ စကားလုံးက အများကြီး မရှိတဲ့အတွက် မှန်ချင်တဲ့ စိတ်ရှိဖို့ပဲ လိုအပ်တာပါ။ ယခုကစပြီး သေချာအောင်၊ သိအောင် သတ်ပုံကျမ်းကို မှီငြမ်းတဲ့ အကျင့်ရှိအောင် ကျင့်ကြံရင် နောက်ပိုင်း ကြည့်စရာ သိပ်မလိုတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာစာလုံးပေါင်းကို အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းလို အလွယ်တကူ စာလုံးပေါင်း မှန်မမှန် Double Click နှိပ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အွန်လိုင်း Myanmar Dictionary ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နှစ်မျိုးစလုံးပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရင် မြန်မာတွေရဲ့ မြန်မာစာ အရေးအသားတွေ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အတတ်ပညာရှင်တွေ ပေါ်လာပါစေလို့ ၀ိုင်းဝန်းပြီး နှိုးဆော်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆရာမကြီးမို့ ဆရာမကြီးလုပ်တာပေါ့/ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ် လုပ်လည်ုးလုပ်သင့်တယ် ဆရာ့ တာဝန်ကို ကျေပွန်မှ ပေါ့ တာဝန်ကျေတတ်မှ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသမှာပေါ့။ကြိုက်တယ် ။လူမျိုးစာပေ ချစ်တဲ့သူဆိုရင် ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်စာပေ ကို အပျက်စီးမခံနိုင်ကြပါဘူး။ သိပ်ကျေးဇူးတင်တယ်။